VAPET 3000 အော်တိုဘူးလေမှုတ်စက်က တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၃၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း- တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၃၀၀၀
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: လမှေုတျစကျ , Bottle (under 2-Liter)
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAPET3000
VAPET3000 bottle blowing machine withacapacity of 3000 bottles/h is being provided by Viet An with the cheapest price in the market.
VAPET 3000 တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၃၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဘူးလေမှုတ်စက်ကို Viet An မှ ဈေးကွက်တွင် အချိုသာဆုံး ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချနေပါသည်။
VAPET3000 bottle blowing machine new solutions for businesses to be proactive in the business of producing bottled water, with this machine you can create 3000 pet bottles per hour. Beautiful design, variety of models and different bottle sizes to bring new products to the product design as well as easily compete with other competitors in the market.
VAPET3000 ဘူးလေမှုတ်စက်အသစ်က ရေဘူးထုတ်လုပ်ခြင်း စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းမှာ လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒီစက်နဲ့ သင်က တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၃၀၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းက လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းရှိတယ်။ မော်ဒယ်စုံ ဆိုဒ်စုံရှိတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခြား စီးပွါးပြိုင်ဘက်များနဲ့ လွယ်ကူစွာ ယှဉ်နိုင်ပါတယ်။
Nowadays, the demand for pure drinking water, soft drink and carbonated water has become an essential demand of society. So did you know that bottle caps, bottle labels and labels make up 70% -80% of the value ofawater bottle product? Model VAPET3000 with great features to meet all the needs of businesses. Using the bottle blowing machine will save youalot of costs compared to buying an external bottle shell and reduce monthly labor costs, the bottle blower also saves energy, is easy to operate and control, can Blow all types of bottles according to your desired size and design. If you arealarge bottled water business, owningabottle blowing machine VAPET3000 is extremely necessary.
ယခုအခါ ရေသန့်၊ အချိုရည်များ သောက်သုံးလာတဲ့သူများ များပြားလာပြီး မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာကြပါတယ်။ ရေဘူး၊ အဖုံး၊ လေဘယ်များ ကုန်ကျစရိတ်ကို သင်သိပါသလား။ Viet An မှ စီးပွါးရေးလိုအပ်ချက် အားလုံးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ဘူးပုံစံမျိုးစုံ၊ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံကို လေမှုတ်ပေးနို်င်တဲ့ တဝက်အော်တို VAPET3000 ဘူးလေမှုတ်စက်အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဘူးလေမှုတ်စက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အလုပ်သမား ကုန်ကျစရိတ်ကို ချွေတာနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အင်နာဂျီကိုလည်း ချွေတာနိုငိပါတယ်။ လည်ပတ်ရ၊ ထိန်းချုပ်ရလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်….သင်လိုချင်တဲ့ အရွယ်အစားမျိုးစုံ၊ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံအတိုင်း လေမှုတ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က ကြီးမားတဲ့ ရေဘူးစက်ရုံ ပိုင်ရှင်ဆိုရင် VAPET3000 ဘူးလေမှုတ်စက်က မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။
VAPET3000 bottle blowing machine withacapacity of 3000 bottles per hour, the machine is assembled according to the most stringent ISO 9001:2015 standards available today. Bottle blowing machine is supplied by Viet An in Vietnam and exported to ASEAN countries.
VAPET3000 လေမှုတ်စက်က တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၃၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ စက်ကို ISO 9001:2015 စံချိန်စံနှုန်းနဲ့ အညီ တပ်ဆင်ပါတယ်။ ဘူးလေမှုတ်စက်ကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ Viet An မှ ပေးပို့ထားပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ပါတယ်။
Why should you buy bottle blowing machine VAPET3000 capacity 3000 bottles / h of Viet An. This article Viet An will introduce to you the automatic VAPET3000 bottle blowing machine, many advantages and usefulness for businesses to seize opportunities for bottled-in business or bottled water businesses .... provided by Viet An company.
တစ်နာရီမှာ ဘူးပေါင်း ၃၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Viet An မှ VAPET3000 လေမှုတ်စက်ကို ဘာကြောင့် ဝယ်ယူသင့်တာလဲ။ ဒီဆောင်းပါးတွင် Viet An သည် တဝက်အော်တို VAPET3000 ဘူးလေမှုတ်စက်အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် Viet An မှ ပေးပို့သော ဘူးခွံ၊ ရေ၊ ရေဘူး များအတွက် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
VAPET3000 bottle blowing machine with capacity of 3000 bottles/h
VAPET3000 တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၃၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဘူးလေမှုတ်စက်
With nearly 20 years of establishment and efforts to constantly develop. We are Viet An company has received many medals, certificates of merit, certificates of merit from the State, the Prime Minister, the President personally awarded. Some Viet An awards have been achieved such as:
Automatic bottle blowing machine with capacity of 3000 bottles / h
တစ်နာရာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၃၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော အော်တိုဘူးလေမှုတ်စက်
VAPET3000 pet bottle blowing machine is applied the US No. 1 advanced bottle blowing technology, assembled at Viet An factory according to ISO 9001:2015 standards. With this pet bottle blowing machine, blowing plastic bottles, agencies will have the best quality products for their production as well as supply bottles, pet bottles, plastic bottles for the market. with reasonable price and guaranteed quality. Because it is an automatic machine, the VAPET3000 bottle blowing machine is fully automatic feeding, the bottle preform will be arranged in the correct head by the automatic bottle loading machine (not reversed) in the order of entering the heater. The number 3000 corresponds toacapacity of 3000 bottles / hour that the machine can blow.
VAPET 3000 ဘူးလေမှုတ်စက်တွင် US နံပါတ် ၁ ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး Viet An စက်ရုံတွင် ISO 9001:2015 စံချိန်စံနှုန်းနဲ့အညီ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီ လေမှုတ်စက်နဲ့ဆိုရင် အေဂျင်စီများက ၄င်းတို့ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံး ကွာလတီပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပြီး ဈေးကွက်မှာ ဘူးများ၊ pet ဘူးများ၊ ပလပ်စတစ်ဘူးများကို သင့်တော်သော ဈေးနှုန်း၊ အာမခံချက်ရှိသော ကွာလတီဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် VAPET3000 အော်တို ဘူးလေမှုတ်စက်က အော်တိုလုပ်ဆောင်နို်င်အောင် တပ်ဆင်ထားပြီး ဘူးအကြိုပုံသွင်းခြင်းကို အပူပေးစက်ထဲသို့ ထည့်ရန် အော်တိုဘူးများကို သယ်ပေးသောစက် (ပြောင်းပြန်မဟုတ်ပါ) ဖြင့် မှန်ကန်သော ခေါင်းနေရာတွင် စီပါတယ်။ နံပါတ် ၃၀၀၀ က စက်ဖြင့် လေမှုတ်နိုင်သော တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၃၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ သင့်တော်ပါတယ်။
The blower is compact and lightweight, doesn't take up too much area. This product is suitable for business units of pure drinking water, bottled carbonated water nationwide.
Photo of automatic bottle blowing machine VAPET3000
The bottle blowing machine system (Must buy) VAPET3000 from Viet An includes:
Viet An မှ VAPET3000 ဘူးလေမှုတ်စက်တွင်……
၃၅၀ မီလီလီတာ ဘူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 2400-3000
၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 2200-3000
၁၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူးများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 1600-2000
လေမှုတ်ခေါင်းတစ်ခု၏ အများဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 1250
အပူပေးခြင်း လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 20
ပုံစံခွက် ပိတ်ပေးသော အား 450
လေမှုတ်စက် အရွယ်အစား 1980*1650*2020
The VAPET300 fully automatic bottle blowing machine has an automatic bottle feeding unit. You just need to pour the bottle preform into the barrel. The preform loader automatically loads the bottle preform and arranges it and puts it in the heater.
VAPET3000 အပြည့် အော်တိုဘူးလေမှုတ်စက်မှာ အော်တို လုပ်ဆောင်သော ယူနစ် ပါရှိပါတယ်။ သင်က ဘူးအကြိုပုံသွင်းခြင်းကို စည်းပိုင်းထဲသို့ ထည့်ပေးရုံပါပဲ။ အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို သယ်ပေးသော စက်က အော်တိုသယ်ဆောင်သွားပြီး ၄င်းကို အပူပေးစက်ထဲသို့ ထည့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Heating machine in the VAPET3000 bottle blowing system: has the effect of heating the Preform and distributing heat evenly on the surface of the Preform. This heater heats 2000-2000 preform of 350ml and 500ml sizes. As for the 1500ml bottle preform, the heater can heat 1500-1800 preforms. Then the surface of the bottle is expanded evenly so that it can be transferred to the server department to blow out the standard bottles. Minimize the error of the finished product.
Bottle blowing machine: Including blowing part and bottle mold part. Thanks to the compressed air of the air compressor, the Preform expanded from the machine to the heat is fed into the blower mold unit. The blower will then blow air from the high-pressure air compressor, causing the preform to deform intoa350 ml cylinder shell, correct in the shape of the mold. This VAPET3000 blower blows 2000-2000 bottles of 350ml and 500ml sizes within 1 hour. As for 1500ml bottles, this machine can blow 1500-1800 bottles within 1 hour. If you want to still use this 350 ml bottle blowing machine to blow 500ml bottles, for bottles smaller than 1500 ml, you must use other blowers and molds. And you can contact Viet An for private reservation.
B. The auxiliary equipment ofabottle blowing machine withacapacity of 3000 bottles / h
တစ်နာရီလျှင် ဘူးပေါင်း ၃၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဘူးလေမှုတ်စက်၏ အကူ ပစ္စည်းများ
လျှပ်စစ်ပါဝါ Kw 11*2
လေဖိသိပ်စက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း M3/min 2/4
စက်၏ အတိုင်းအတာ D*R*C mm 2000*1700*1450
အလေးချိန် KG 1000
The high pressure compressor of the VAPET3000 bottle blowing system is responsible for generating high pressure air flow, providing high pressure air to blow out beautiful bottles.
VAPET3000 ဖိအားမြင့် လေဖိသိပ်စက်က ဖိအားမြင့် လေစီးကြောင်း ဖန်တီးပေးတယ်။ လေမှုတ်ရန် ဖိအားမြင့်သော လေ ပေးတယ်။
Air filter: The air filter of the VAPET3000 bottle blower is mounted behind the air tank (also known as the air tank). The air filter works to filter the air and clean the air before it is fed into the air dryer. It is very important that the air is cleaned when the bottle finish is defective.
Above is the system of blowing machine VAPET3000 of Viet An.
အပေါ်က ဖော်ပြထားခဲ့တာက Viet An မှ VAPET3000 လေမှုတ်စက်၏ စနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘူးလေမှုတ်ကိရိယာအတွက် ပုံစံခွက်များ (သီးသန့်ဝယ်ယူရမည်)
In addition, you must purchaseaseparate mold to match the bottles you want to create. In addition, you must purchaseaseparate mold Not necessarily buying from Viet An.
What will you get if you buy Viet An VAPET3000 bottle blowing machine?
Viet An မှ ယူဆောင်လာသော VAPET3000 ဘူးလေမှုတ်စက်၏ ကောင်းကျိုးများ
The VAPET3000 bottle blowing machine has the lowest error rate! There is no machine on the Vietnamese market today that can guarantee suchalow rate of finished bottle errors.
၃၅၀ မိလီမီတာ၊ ၅၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၅၀၀ မီလီမီတာ ဘူးလေမှုတ်စက်များရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေက ဈေးကွက်မှာ ဈေးအပေါဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ VAPET3000 ဘူးလေမှုတ်စက်က အပျက်အစီး အရှိန်နှုန်း အနည်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်ဈေးကွက်မှာ အခုလိုမျိုး ပျက်စီးမှု အရှိန်နှုန်း အနည်းဆုံးဖြစ်သော ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ဘူးများကို အာမခံတဲ့ စက် မရှိပါဘူး။
VAPET3000 bottle blowing machine uses the latest Italian technology, so it is extremely energy-efficient. Reducing the cost of the bottle, helping you to compete very well with the market, without having to worry about price competition.
VAPET 3000 ဘူးလေမှုတ်စက်က နောက်ဆုံးပေါ် အီတလီနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အင်နာဂျီအတွက် အလွန် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဘူး၏ ကုန်ကျငွေကို လျှော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင် သင့်ကို ဈေးနှုန်းပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘဲ ဈေးကွက်မှာ နေရာရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘူးလေမှုတ်စက်ကို အလွန် တည်ငြိမ်တဲ့ ကွန်ပြူတာ ထိန်းချုပ်စနစ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ လုံခြုံသော လော့နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် ပြသနာ တစုံတရာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင် အော်တို မတပ်ဆင်ဘဲ နေပါတယ်။
The bottle blowing machine provided by Viet An is the only machine on the market that can change the mechanism from bottle blowing to bottle blowing. This mechanism is tailored by Viet An according to the needs of each customer.
During operation the machine works very smoothly. Less noise, does not affect people around.
The VAPET3000 bottle blowing machine is also compact and does not take up space. Make your workshop space clean and eye-catching.
VAPET3000 ဘူးလေမှုတ်စက်ကို နေရာမပြုန်းတီးစေရန် သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်း ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အလုပ်ရုံနေရာကို သန့်ရှင်းစေပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေပါတယ်။ ၂၀ လီတာ ဘူးမှုတ်ကိရိယာက ၁၂ လ အာမခံချက်ရှိပါတယ်။ ရောင်းချပြီးနောက် ဆားဗစ်ကလည်း အလွန် ကောင်းပါတယ်။.
Process of blowing bottle VAPET3000 supplied by Viet An
Viet An မှ ပေးပို့သော VAPET3000 ဘူးလေမှုတ်စက်၏ လုပ်ဆောင်ပုံ
Step 1: Place the 350ml, 500ml, 1500ml Preform in the heater to heat the Preform, allowing the blank surface to expand evenly.
အဆင့် ၁- ၃၅၀ မီလီမီတာ၊ ၅၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၅၀၀ မီလီမီတာ အကြိုပုံသွင်းခြင်းကို အပူပေးရန် အပူပေးစက်ထဲသို့ ထည့်ပါ။ ၄င်းကို ချဲ့ရန် ခွင့်ပြုပါ။
Step 2: Place the Preform of the evenly expanded bottle into the blower mold. To proceed with blowing the bottle. What shape you want the bottle to look like, it will depend on the mold you order! 350ml, 500ml, 1500ml bottles will be deformed according to the shape of the mold.
၃၅၀ မီလီမီတာ၊ ၅၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၅၀၀ မီလီမီတာဘူးများကို ပုံစံခွက်ရဲ့ ပုံစံအတိုင်း ပုံထွက်လာစေပါတယ်။
Note when usingaVAPET3000 bottle blowing machine from Viet An
Viet An ၏ VAPET3000 ဘူးလေမှုတ်စက်ကို အသုံးပြုသောအခါ မှတ်သားထားရမည်များ
Customers who buy the bottle blowing machine VAPET3000 from Viet An will be transported and installed free of charge with 1 year machine warranty and long-term maintenance. Withateam of professional technicians with high experience in the profession, we will give customers the best conditions for mutual benefits.
If you haveademand for bottle blowing machine VAPET3000 please contact: 0949.41.41.41 for the best advice! Wishing you good health.
Viet An ရဲ့ VAPET 3000 ကို ဝယ်ယူသူများသည် အခမဲ့ပို့ဆောင် တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ တစ်နှစ် အာမခံချက်၊ ကာလကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုတို့ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ပြီး အတွေ့အကြုံများသော နည်းပညာအသင်းမှ ဝယ်ယူသူများအတွက် အကောင်းဆုံး အခြေအနေကို လမ်းညွှန်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့သင်က ဘူးလေမှုတ်စက် VAPET3000 ကို ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် ၀၉- ၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်ပြီး အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ် ရယူလိုက်ပါ။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
VAPET 3000 Bottle Blowing System Specifications (Must-Buy)
VAPET3000 ဘူးလေမှုတ်စက် ဖော်ပြချက်များ (မဝယ်မနေရ)
လေဖိသိပ်စက်များအတွက် လေတိုင်ကီ Compressive pressure (Bar)
လျှပ်စစ်ပါဝါ 11* 2
Compressive capacity (M3 / min)
စက်၏ အတိုင်းအတာ 2000*1700*1450
Air bottles for high pressure air compressors
လေဖိသိပ်စက်များအတွက် လေတိုင်ကီ Capacity (Liter)
အထွေထွေ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ 3HP
တင်ပို့ထားသော စတီး ပုံစံခွက်က ၃၅၀ မီလီလီတာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
Hỏi đáp & đánh giá VAPET3000 ဘူးလေမှုတ်စက်